Iindaba-Ukuchonga ukuba ngaba ukuPakisha okuThuthwayo okuSebenzisekayo kufanelekile kwiNkampani yakho NGURICK LEBLANC
Eli linqaku lesithathu nelokugqibela kuthotho oluneenxalenye ezintathu. Inqaku lokuqala lichaze ukuphinda kuhanjiswe kwezothutho kunye nendima yalo kumxokelelwano wokubonelela, inqaku lesibini lachaza izibonelelo zoqoqosho nezokusingqongileyo zokupakishwa kwezothutho ezinokusetyenzwa kwakhona, kwaye eli nqaku lokugqibela libonelela ngeeparameter kunye nezixhobo zokunceda abafundi ukuba babone ukuba kuyanceda na ukutshintsha konke okanye ezinye zeenkampani ezisebenza ngexesha elinye okanye ezingasetyenziswanga ekupakisheni ukuthuthwa kwenkqubo yokuhambisa izinto.
Xa kuthathelwa ingqalelo inkqubo yokuphinda isebenze yokuhambisa izithuthi, imibutho kufuneka ithathe umbono opheleleyo wezoqoqosho kunye nokusingqongileyo iindleko zokulinganisa ifuthe elinokubakho jikelele. Kwinqanaba lokunciphisa iindleko zokusebenza, kukho iindawo ezininzi apho ukonga iindleko kudlala indima ephambili kuvavanyo lokuba ukuphinda usebenzise kwakhona kuyindlela enomtsalane. Oku kubandakanya ukuthelekiswa kwezinto eziphathekayo (ukusetyenziswa okukodwa xa kuthelekiswa nokusetyenziswa okuninzi), ukonga abasebenzi, ukonga ezothutho, imiba yomonakalo kwimveliso, imiba yokhuseleko lwe-ergonomic / yabasebenzi kunye nezinye iindawo ezimbalwa zokugcina imali.
Ngokubanzi, izinto ezininzi zichonga ukuba kuya kuba luncedo ukutshintsha yonke into okanye enye yenkampani ngexesha elinye okanye ukusetyenziswa okuphelelweyo kokupakisha kwinkqubo yezothutho yokuphinda isebenze, kubandakanya:
Inkqubo evaliweyo evaliweyo okanye elawulwayo yokuthumela ngaphandle: Nje ukuba iipakethe zothutho ezinokuphinda zisetyenziswe zithunyelwe kwindawo ekugqityelwa kuyo kwaye imixholo isuswe, izinto zokupakisha zezothutho ezingenanto ziyaqokelelwa, zihlelwe, zibuyiswe ngaphandle kwexesha elininzi kunye neendleko. Ukubuyela umva kulungiselelo-okanye uhambo lokubuya lwezinto zokupakisha ezingenanto- kufuneka ziphindwe kwinkqubo yokuhambisa evulekileyo okanye elawulwayo evulekileyo.
Ukuhamba kweemveliso ezingatshintshiyo kwimiqulu emikhuluInkqubo yokuphinda isebenze yokuhambisa kulula ukuyithethelela, ukuyigcina, kunye nokuqhuba ukuba kukho ukuhamba kweemveliso ezingaguquguqukiyo kwimiqulu emikhulu. Ukuba zimbalwa iimveliso ezithunyelwayo, iindleko zokonga ezinokubakho zokupakisha ezinokuphinda zisetyenziswe zinokuhlawulwa lixesha kunye nenkcitho yokulandelela izinto zokupakisha ezingenanto kunye nokubuyisela umva izinto. Utshintsho olubonakalayo lokuhamba rhoqo okanye iintlobo zeemveliso ezithunyelweyo zinokwenza kube nzima ukucwangcisa ngokuchanekileyo inani elichanekileyo, ubungakanani, kunye nohlobo lwezinto zokupakisha ezothutho.
Iimveliso ezinkulu okanye ezinkulu okanye ezo zonakaliswe lula: Aba ngabaviwa abalungele ukupakishwa kwezothutho. Iimveliso ezinkulu zifuna ezinkulu, ezibiza ixesha elinye okanye izikhongozeli zokusebenzisa ezinomda, ngenxa yoko ukubakho kweendleko zexesha elide ngokutshintshela kupakisho lwezothutho olunokuphinda lusebenze kuhle.
Ababoneleli okanye abathengi ababekwe amaqela kufutshane omnye komnye: Oku kwenza ukuba kunokwenzeka abaviwa kulondolozo lwezothutho lwendleko zokupakisha. Isakhono sokumisela “iindlela zokubaleka ubisi” (ezincinci, iindlela zemihla ngemihla zeelori) kunye namaziko okudityaniswa (ukulayishwa kweedokodo ezisetyenziselwa ukuhlenga, ukucoca, kunye nenqanaba lezinto ezinokuphinda zisebenze zokupakisha zothutho) kudala amathuba okonga iindleko.
Imithwalo yangaphakathi inokuthathwa kwaye idityaniswe ukuhanjiswa rhoqo rhoqo ngexesha elifanelekileyo.
Ukongeza, kukho abanye abaqhubi abaphambili abazibolekayo kumanqanaba aphezulu okusebenzisa kwakhona umntwana, kubandakanya:
· Umthamo omkhulu wenkunkuma eqinileyo
· Ukuncipha rhoqo okanye umonakalo wemveliso
· Ukupakisha okubiza inkcitho eninzi okanye ukuphinda usebenzise iindleko zokusebenzisa zodwa
· Isithuba setreyila esingasetyenziswanga ngokupheleleyo kwezothutho
· Indawo yokugcina / yokugcina ingasebenzi kakuhle
Ukhuseleko lwabasebenzi okanye imiba ye-ergonomic
· Imfuno ebalulekileyo yococeko / yezempilo
· Imfuno yokumanyaniswa
· Ukuhamba rhoqo
Ngokubanzi, inkampani kufuneka ithathele ingqalelo ukutshintshela kupakisho lwezothutho olunokuphinda lusebenze xa kungabiza ixabiso eliphantsi kunokusetyenziswa kube kanye okanye ukupakishwa kokusetyenziswa okuncinci, kwaye xa izama ukufikelela kwiinjongo zokuzinza ezibekelwe umbutho wazo. La manyathelo mathandathu alandelayo anokunceda iinkampani ukuba zibone ukuba ukuphinda uthuthe ukuhanjiswa kungongeza inzuzo kumgca wabo osezantsi.
1. Chonga iimveliso ezinokubakho
Phuhlisa uluhlu lweemveliso ezithunyelwa rhoqo kumthamo omkhulu kunye / okanye ezingaguquguqukiyo kuhlobo, ubungakanani, imilo kunye nobunzima.
2. Qikelela iindleko zexesha elinye kunye nokusetyenziswa okunomda
Qikelela iindleko zangoku zokusebenzisa iipali kunye neebhokisi zexesha elinye. Bandakanya iindleko zokuthenga, ukugcina, ukuphatha nokulahla ukupakishwa kunye neendleko ezongeziweyo zayo nayiphi na imida ye-ergonomic kunye nokhuseleko lwabasebenzi.
3. Phuhlisa ingxelo yejografi
Phuhlisa ingxelo yejografi ngokuchonga ukuhambisa kunye neendawo zokuhambisa. Vavanya ukusetyenziswa kwemihla ngemihla kunye neveki "yokubaleka ubisi" kunye namaziko okudibanisa (ukulayisha iichweba ezisetyenziselwa ukuhlenga, ukucoca kunye nenqanaba lokuphinda lisetyenziswe). Qwalasela kwakhona ikhonkco lonikezelo; kunokwenzeka ukuba kube lula ukuhambisa izinto ezinokuphinda zisetyenziswe kunye nabathengisi.
4. Ukuphonononga ukhetho lwezinto ezinokuphinda zisetyenziswe zokupakisha kunye neendleko
Ukuphonononga iintlobo ezahlukeneyo zeenkqubo zokupakisha zothutho ezinokusetyenzwa kwakhona kunye neendleko zokuzihambisa ngokudibanisa. Phanda iindleko kunye nobude bexesha lokuphila (inani lokusetyenziswa kwakhona) kwezinto ezinokuphinda zisebenze zokupakisha izinto.
5. Qikelela iindleko zokuhlengahlengiswa kwezinto
Ngokusekwe kwindawo zokuhambisa kunye nokuhambisa ezichongiweyo kwingxelo yejografi ephuhliswe kwinyathelo lesi-3, qikelela iindleko zokuhlengahlengiswa kwempahla kwindawo evaliweyo okanye elawulwayo yenkqubo yokuthumela evulekileyo.
Ukuba inkampani ikhetha ukungazinikeli ngezixhobo zayo ekulawuleni ukubuyela umva kwezinto, inokufumana uncedo lwenkampani yolawulo lokudibanisa iqela lesithathu ukuze iphathe yonke into okanye inxenye yenkqubo yokubuyela umva.
6. Phuhlisa uthelekiso lweendleko zokuqala
Ngokusekwe kulwazi oluqokelelwe kumanyathelo angaphambili, phuhlisa uthelekiso lweendleko zokuqala phakathi kwexesha elinye okanye ukusetyenziswa okuncinci kunye nokupakishwa kwezothutho okunokusetyenziswa kwakhona. Oku kubandakanya ukuthelekisa iindleko ezikhoyo ezichongiweyo kwiNyathelo 2 ukuya koku kulandelayo:
-Ixabiso lesixa kunye nohlobo lwezinto ezinokuphinda zisetyenziselwe ukupakisha zenziwe uphando kwiNyathelo 4
-Iindleko eziqikelelweyo zokuhlengahlengiswa kwezinto kwiNyathelo 5.
Ukongeza kolu londolozo lunokulinganiswa, ukupakishwa okusebenzisekayo kuye kwafakazelwa ukuba kunciphisa iindleko ngezinye iindlela, kubandakanya ukunciphisa ukonakaliswa kwemveliso okubangelwa zizikhongozeli eziphosakeleyo, ukunciphisa iindleko zabasebenzi kunye nokwenzakala, ukunciphisa indawo efunekayo ukulungiselela uluhlu lweempahla, kunye nokwandisa imveliso.
Nokuba ngabaqhubi bakho bakwezoqoqosho okanye okusingqongileyo, kukho amathuba okuba ukubandakanya ukupakisha kwakhona kunikezelo lwakho lwempahla kuya kuba nefuthe elihle kumgca wenkampani yakho nakwimeko-bume.